Ukuzibophezela Komphakathi - I-NBC Electronic Technologic Co., Ltd.
> Ukuqinisekisa impilo nenhlalakahle yesisebenzi.
> ukwenza amathuba amaningi kubasebenzi ukuthi babone amakhono abo.
> ukuthuthukisa injabulo yomsebenzi
I-HOUD (NBC) inaka imfundo yokuziphatha yabasebenzi nokuhambisana nayo, kanye nempilo yabo nenhlalakahle yabo, banikela ngendawo yokusebenza enethezekile nomoya ukuqinisekisa ukuthi abantu abasebenza kanzima bangaklonyeliswa ngokufanele ngesikhathi. Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwenkampani, sinaka uhlelo lokuthuthukisa amakhono lomsebenzi, senze ithuba elengeziwe lokuthi babone ukubaluleka kwabo, iphupho labo.
Ngokuhambisana nomthethonqubo kahulumeni, sinikeza ukuthi umholo awusoze waba ngaphansi kwezidingo zikahulumeni ezisezingeni eliphansi, futhi ngasikhathi sinye, uhlaka lwamaholo oluzoqhudelana luzosetshenziswa.
IHOUD (NBC) ilungiselele uhlelo olubandakanya bonke abasebenzi lokuphepha, ukuthobela umthetho nokuzikhuza kwabasebenzi kuyakhuthazwa. Ukwenza ngcono isinyathelo somsebenzi kanye nobuchule, uhlelo lokukhuthaza njengemiklomelo yezezimali, imiklomelo yezokuphatha kanye nomklomelo okhethekile womnikelo kwaba ukusethwa. Futhi ngasikhathi sinye sinemiklomelo yaminyaka yonke njengokuthi “umklomelo wophiko lokusungula kanye nokuhlelela iziphakamiso
- Ukunakekela impilo
I-OT kufanele isuselwe kokuzithandela komsebenzi, wonke umuntu kufanele okungenani abe nosuku lokuphumula njalo ngesonto. Ukulungiselela inani eliphakeme lokukhiqiza, uhlelo lokuqeqeshwa komsebenzi oluxubile luzoqinisekisa ukuthi isisebenzi singaphendula kweminye imisebenzi. Ekucindezelweni kokusebenza kwabasebenzi, ku-HOUD （NBC）, abaphathi bacelwa ukuthi banakekele impilo yomzimba nengqondo yabasebenzi, bahlele imisebenzi kwesinye isikhathi ukwenza ngcono ukuxhumana okungaphansi kakhulu, ukuhlela imisebenzi yokwakha amaqembu ukwenza ngcono umoya weqembu, ukukhulisa ukuqonda nokwethembana nokubumbana kwethimba .
Ukuhlinzekwa kokuhlolwa kwamahhala kuka-Annul, kuzolandelwa umkhondo wezempilo bese kutholwa isiqondiso.
> Sebenzisa isu "lokuphepha, elezemvelo, elithembekile, lokonga ugesi".
> Yenza imikhiqizo yezemvelo.
> Ukuqalisa ukonga ugesi nokunciphisa ukungcola ukuze kuphendulwe ukuguquka kwesimo sezulu.
I-HOUD (NBC) inake ngokucophelela izidingo zemvelo, amandla ethu ngendlela efanele nangendlela efanelekile, isisetshenziswa ukunciphisa izindleko zethu nokwenza ngcono izinzuzo zemvelo. Ukuqhubeka nokunciphisa umthelela ongemuhle wezemvelo ngokwenziwa okusha ukusunduza ukuthuthukiswa kwekhabhoni ephansi.
- Ukongiwa kwamandla nokuncishiswa kokungcola
Ukusetshenziswa kwamandla okuyinhloko ku-HOUD (NBC): Ukusetshenziswa kwamandla okukhiqiza nawokuhlala, ukusetshenziswa kwe-LPG yokuhlala, uwoyela kadizili.
Ukungcoliswa kwamanzi okuyinhloko: indle yasekhaya
- Noise ukungcola
Ukungcoliswa komsindo okuyinhloko kuvela ku: air compressor, slitter.
Kubandakanya ukusetshenziswa kabusha, imfucuza eyingozi, kanye nemfucuza ejwayelekile. Ikakhulu: izingcezwana eziyinqaba, imikhiqizo ehlulekile, imishini / isitsha esilahliwe esilahliwe, izinto zokupakisha imfucuza, izinto zokubhala ezingcolile, iphepha lodoti / izinto zokuthambisa / indwangu / ukukhanya / ibhethri, udoti wasekhaya.
I-HOUD (NBC) igxila ekuqondisweni kwamakhasimende, ngokuxhumana okukude ukuze iqonde ngokujulile ukulindela kwamakhasimende, ngokuzimisela ukuthatha ukuzibophezela. Ukwenza ngcono ukwaneliseka kwamakhasimende, insizakalo yamakhasimende, ukusondela ekubambisaneni kwesikhathi eside nokunqoba ngokunqoba nekhasimende.
I-HOUD (NBC) ihola ukulindela kwamakhasimende ekuhlelweni kwemikhiqizo nasekuthuthukisweni, qinisekisa ukuthi isicelo sekhasimende singaba impendulo ngesikhathi, sondle ngokushesha izidingo zamakhasimende, ukwenza inani elengeziwe lekhasimende.
Ukuxhumana Kwabanye Abantu
Kukhona ukuxhumana okusemthethweni nokungahlelekile ku-HOUD (NBC). Isisebenzi singaveza isikhalazo saso noma siphakamise ngqo kumphathi waso noma kubaphathi abaphezulu. Ibhokisi lesiphakamiso libekwe ekuqoqweni kwezwi kubasebenzi kuwo wonke amazinga.
Kwanakwa ngomthetho, imfundo ethembekile neyokuziphatha ngebhizinisi. Vikela ilungelo lakho lobunikazi futhi uhloniphe amanye amalungelo obunikazi. Ukwakha uhlelo olusebenzayo nolusobala lokulwa nenkohlakalo.
IHOUD (NBC) iyaqaphela ekuqongeleleni okuyisisekelo kwezobuchwepheshe nasekuvikelweni kwempahla yengqondo. Ukutshalwa kwezimali kwe-R & D akukaze kube ngaphansi kuka-15% wokuthengiswa konyaka, kubambe iqhaza ekwenzeni indinganiso yamazwe omhlaba. Hlonipha impahla yengqondo yabanye, ngesimo esivulekile, esinobungane, ukuthobela nokusebenzisa imithetho yamazwe omhlaba yempahla,
Ngokuxoxisana, ilayisense yokuwela, ukubambisana njll. Xazulula inkinga yempahla yokusungula. Okwamanje maqondana nomthetho wokwephula umthetho, i-NBC izoncika engalweni yezomthetho ukuvikela izintshisekelo zethu.
I-HOUD (NBC) ithatha inqubomgomo "yokuphepha kuqala, igxile ekuqapheleni", ngokuqalisa ukuqeqeshwa kwezempilo nokuphepha kwezemisebenzi, ibeke imithetho yokuphatha kanye nendlela yokusebenza ukuze kuthuthukiswe ukuphepha komkhiqizo nezingozi.
IHOUD (NBC) ingummeli wesayensi nobuchwepheshe, ukutshalwa kwamathalente, ukwenza ngcono umsebenzi. Iyasebenza enhlalakahleni yomphakathi, emphakathini obuyayo, umnikelo wendawo yasendaweni ukwenza ibhizinisi elibhekele izakhamizi.